तपाईंको मत बदर हुने त होइन ? जान्नुहोस् मतदान गर्ने सही तरिका - Himalayan Kangaroo
तपाईंको मत बदर हुने त होइन ? जान्नुहोस् मतदान गर्ने सही तरिका
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ मंसिर २०७४, शनिबार १२:०४ |
काठमाडौं। पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आइतवार हुँदैछ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी २१ गते हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न नजान्दा धेरै मत बदर भएका थिए । अहिलेको निर्वाचनको लागि मतदान प्रक्रिया यस्तो छ :
मत हाल्ने सही तरिका
यो पटकको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रकारका मतपत्र छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ छुट्टा–छुट्टै रङका मतपत्र छन् ।
प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षका लागि हरियो रङको मतपत्र छ । हरियो रङको मतपत्रमा हरियो रङका चुनाव चिह्न छन् । मतदाताले आफूले चाहेको दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा मत दिनुपर्नेछ । एकभन्दा बढी चिह्नमा मत दिए स्वतः बदर हुनेछ ।
यस्तै, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षका लागि कालो रङको मतपत्र छ । कालो रङको मतपत्रमा कालो रङकै चुनाव चिह्न छन् । मतदाताले मतपत्रमा उल्लेख चिह्नमध्ये एउटामा मात्र मतसङ्केत गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिकमा भने एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ भाग लिने दलका चुनाव चिह्न छन् । सेतो रङको पानामा चुनाव चिह्न रातो रङका हुनेछन् । मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा भाग लिने दलका चुनाव चिह्न छन् । मतदाताले कुनै एउटा दलको चिह्नमा मात्र मत दिनुपर्नेछ
यस्तै तल्लो भागमा प्रदेशसभाको समानुपातिकमा भाग लिने दलको चिह्न रहनेछ । उक्त भागमा पनि मतदाताले आफूले रोजेको कुनै एउटा दलको चिह्नमा मात्र मत दिन पाउनेछन् । एकभन्दा बढी चिह्नमा मत दिए मत बदर हुनेछ ।
यस्तो गरे मत बदर हुन्छ
मतदाताले एकभन्दा बढी निर्वाचन चिह्नमा मतसङ्केत गरे मत बदर हुन्छ । यस्तै, चुनाव चिह्न रहेको कोठा बाहिर स्वस्तिक छाप लगाएमा पनि मत बदर हुन्छ । मत हाल्दा गर्दा स्वस्तिक चिह्न बाहेक अन्य कुनै वस्तु प्रयोग भएमा पनि मत बदर हुन्छ । यस्तै मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर (सही) नभएको मतपत्रबाट मतदान गरेमा पनि मत बदर हुन्छ ।
तपाईं (मतदाता)ले यो पटक तीनवटा मतपत्रको चार ठाउँमा आफूले रोजेको उम्मेदवार वा दलको चुनाव चिह्नमा मत दिन पाउनु हुनेछ ।
Previousगायक किरण प्रधान : के सोचें मैले,के भयो अहिले
Nextटीकापुर घटनाका फरार अभियुक्त रेशमको चुनाव प्रचार प्रोजेक्टरबाट
सन्दीप लामिछानेले अष्ट्रेलियाको बिग बास खेल्ने,६० हजार डलर पारिश्रमिक
६ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०२:०१
राजधानीमा मरेका बाख्राको मासु बेचिँदै, व्यवसायी पक्राउ
१२ असार २०७४, सोमबार ०१:५२